Mogok Media: June 2008
ပထမအကြိမ် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း (၂၀၀၈-ခုနှစ်)
လွန်ခဲ့သောနှစ်များနည်းတူ ယခုနှစ်တွင်လည်း ရေနီမြောင်းရေလျှံမှုကြောင့် လူနေရပ်ကွက်များအတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုများ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ယနေ့နံနက် (၁)နာရီခန့်အချိန်မှစပြီး မိုးများအဆက်မပြတ် သည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် နံနက် (၅)နာရီလောက်တွင် ရေနီချောင်းတစ်လျှောက်ရှိ တာရိုးများ ကျိုးပေါက်ကာ လူနေရပ်ကွက်များ၊ လမ်းမကြီးများပေါ်သို. ရေနီများအရှိန်အဟုန်နှင့် ၀င်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရေနီချောင်းတစ်လျှောက်ရှိ နေအိမ်များမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို ဆိုးရွားစွာခံကြရပြီး တောင်ကမ်းပါးယံ အနီးဝန်းကျင်ရှိ နေအိမ်များမှာလည်း မိုးသည်းထန်မှုကြောင့် ကမ်းပါးများပြိုကျကာ နေရာများစွာတွင် အတော်အတန် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အများဆုံး နေရာများမှာ အုန်းကိုင်းရွာသစ်၊ ပန်းခြံထာပွဲဝန်းကျင်နှင့် မိုးကုတ်မိုတယ် နေရာများ ဖြစ်ကြပြီး စုစုပေါင်း လူ(၁၁)ဦး အသေအပျောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ တောင်ပြို၍ု နေအိမ်များပျက်စီးခြင်းကြောင့် အုန်းကိုင်းရွာသစ်တွင် အမျိုးသမီး (၁)ဦး၊ ပိတ်စွယ်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် အမျိုးသား (၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦး၊ ကလေး (၃)ဦးတို.မြေပိသေဆုံးခဲ့ရပြီး ပန်းခြံထာပွဲတွင် အမျိုးသား (၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂)ဦး တို. ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
မိုးကုတ်မြို.တွင် ကျောက်မျက်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည့်နေရာ တစ်ခုဖြစ်သော ပန်းခြံထာပွဲမှာလည်း ရွှံ.နွှံများ၊ ကနယ်မုံများ၊ အမှိုက်များ ထူထပ်စွာပြည့်လျှံပိတ်ဆို့လျက်ရှိရာ ကျောက်ကုန်သည်များအဖို. လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် နေရာအခက်အခဲ အချိန်အတန်ကြာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 3:12 PM5comments